मन थामेर हेर्नुहोस् : यो मन्दिरमा जे भयो ! – PathivaraOnline
Home > Uncategorized > मन थामेर हेर्नुहोस् : यो मन्दिरमा जे भयो !
admin November 22, 2020 Uncategorized	0
एजेन्सी । विश्वमा कहिलेकाँही यस्ता घटनाहरु हाम्रा वरपर हुन्छन्, जसलाई सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै एक भिडियो अहिले बाहिर आएको छ । भारत उत्तर प्रदेशमा दिनभर रामपुरको मिलाक बिलासपुर सडकमा एउटा विशाल अजिङ्गर आइपुगेको थियो । त्यसले त्यस क्षेत्रमा अचानक त्रास निम्त्यायो । सयौं मानिसहरूले हेर्न थाले । अजिङ्गरले जि’उँदो प’शुलाई नि’ल्यो तर पछि सडकमा आएर घाइते अवस्थामा परेको थियो ।
सडकमा अजिङ्गर देखापरेपछि गाउँलेहरूले वन विभागका अधिकारीहरूलाई फोन गरेर जानकारी गराए । गाउँलेहरुको सूचनामा एक दिनपछि आएका वन विभागका कर्मचारीहरू अजिङ्गरलाई लिएर आवासीय क्षेत्रबाट जंगलमा गए । घटना कोतवाली क्षेत्रको सिहारी गाउँको हो । जानकारी अनुसार अजिङ्गर जंगलबाट गाउँतर्फ आयो र गाउँको नजिकै रहेको मन्दिरमा पुग्यो ।
त्यसपछि त्यो अजिङ्गर सडकमा पुग्यो, जसले गर्दा सर्वसाधारण त्रसित भएका हुन् । सडकमा पुगेपछि अजिङ्गरले एक ज’नावरलाई नि’ल्यो । जसले गर्दा उसको पेट फुलेको थियो । त्यहाँबाट कतै पनि जान सकेन । मन्दिरमा रहेका पुजारी धारा जीत सिंहले अजिङ्गरलाई पहिलोपटक देखेका हुन् । उनले हल्ला गरेपछि त्यहाँका गाउँलेहरू पनि त्यस स्थानमा जम्मा भए ।
गाउँलेहरूले भने कि उनीहरूले रातमा वन विभागलाई अजिङ्गरबारे जानकारी दिएका थिए तर बिहानसम्म पनि कोही पनि त्यहाँ नपुगेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । यता, वन विभाग अधिकारी श्यामलाल गंगवार आइतवार बिहान साढे आठ बजे अन्य कर्मचारीहरूसँग घटनास्थल पुगेको जानकारी गराएका छन् ।
डोरीको सहयोगमा अजिङ्गरलाई ट्रयाक्टर ट्रलीमा लोड गरियो र जंगलमा छोडियो । श्यामलाल गंगवारले अजिङ्गरको लम्बाई ११ देखि १२ फिट भएको बताएका छन् । अजिङ्गर महिला हो र पूर्ण स्वस्थ रहेको छ । ‘शि’का’र’ गर्दा ऊ घा’इते भयो । उपचारपछि उसलाई जंगलमा छोडिएको वन अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । **भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस्**
हिजो पक्राउ परेका कमेडियन भारती सिंह दम्पतीको बयानले प्रहरी चकित
कैलालीमा शंकास्पद दुर्घटना, मोटरसाइकल चालकको ज्यान गयो, परिवारले लाश उठाउन मानेनन्
राजधानीबासीहरूकाे बर्षाैंदेखिकाे सपना फेरि तुहियो
pathivaraonline.com is an online Blog which index online videos to watch online in an easier accessible manner. This site doesn’t host any content on it own server and just linking to content that was uploaded to popular Online Video hosting sites like dailymmotion.com, Youtube.com, video.google.com, ZShare.net, megavideo.com and such sites. any Violation please inform us at [email protected]hivaraonline.com